Sony Xperia M4 Aqua dia ofisialy amin'ny chip Snapdragon 615 | Androidsis
Manuel Ramirez | | MWC, About us, Sony
Raha misy telefaona roa izay nahavita nitondra ny firindrana tsara indrindra amin'ny lafiny singa sy fiainana bateria lava kokoa noho ny hafa dia ireo no Xperia Z3 sy Xperia Z3 Compact. Io dia nahafahan'ny Sony nahazo ny hevitra tsara indrindra tao anatin'izay volana vitsy lasa izay ary nanapa-kevitra ihany ianao tamin'ny farany fa tsy handefa fitaovana sainam-pirenena iray monja isan-taona.
Ao amin'ny Mobile World Congress Sony dia nanambara fitaovana iray hafa Na izany aza tsy hahatratra ny farany ambony Amin'ireo roa voalaza ireo, dia misy singa ilaina hikajiana azy io. Ny Xperia M4 Aqua no finday avoakan'i Sony ho an'ny MWC ary Mampiavaka azy ny efijery 5-inch misy ny vahaolana 720p, Puce Snapdragon 615 64-bit ary fakan-tsary 13MP miaraka amin'ny sensor Exmor RS malaza. Ny vidin'ity telefaona Android any Eropa ity dia € 299.
1 Tsy te handao antsika i Sony
2 Rano mandeha amin'ny rano
Tsy te handao antsika i Sony
Miaraka amin'ny tsaho rehetra mifandraika amin'ny fanjavonan'ny fizarana finday misy azy dia nisy ny tahotra izay mety hidika hoe tsy fahatongavan'ilay terminal intsony ny mpamokatra Japoney, toa mbola te handefa terminal ry zareo toy ny roa Xperia Z3.
Ilay vaovao ananantsika anio dia ny Xperia M4 Aqua miaraka amin'ny efijery 5p 720-inch, RAM 2GB, puce Octa-core Qualcomm Snapdragon 615, fakan-tsary aoriana 13MP, Eo aloha 5 MP ary bateria 2400 mAh. Ity smartphone ity dia hanana karazany roa amin'ny tahiry inona amin'ny iray amin'ny 8GB ary iray hafa amin'ny 16, izay azo hitarina amin'ny alàlan'ny fampiasana karatra micro SD.
Iray amin'ireo mampiavaka azy lehibe indrindra ny Fanamarinana IP65 / 68 izay manome fanoherana azy amin'ny rano sy ny vovoka. Raha resaka fifandraisana, dia ho hita ao amin'ny LTE amin'ny faritra sasany raha toa ka 3G any amin'ny faritra hafa.
Efijery 5 inch (1280 x 720)
Octa-core puce Qualcomm Snapdragon 615 64-bit 1.5 GHz
2GB an'ny RAM
8GB / 16GB fitehirizana anatiny azo aorina amin'ny microSD
Fakan-tsary 13MP aoriana, fandraketana horonantsary 1080p
Fakan-tsary eo aloha 5MP, fandraisam-peo video 720
7.3mm matevina ary lanja 140 grama
Sony dia nametraka ny fahitany amin'ny famoahana eran-tany miaraka amin'ny Xperia M4 Aqua amin'ny filazany fa ho hita any amin'ny firenena 80 manerantany. Mpandraharaha maherin'ny 100 no hanolotra ny terminal ary dia ho tonga amin'ny vidiny 299 € any Eropa. Ho hitantsika izany amin'ny Q2 amin'ity taona ity, izay amin'ny volana manaraka amin'ny fahatongavana aorian'ny Xperia Z4 Tablet ary avy eo ny Xperia Z4 vaovao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Sony » Sony Xperia M4 Aqua dia nanambara tamin'ny chip 64-bit Snapdragon 615 sy fakan-tsary 13MP
Sony Xperia Z4 Tablet izao dia ofisialy miaraka amin'ny efijery 10.1 "2K sy puce Snapdragon 810